पहिलो त्रैमासमा निर्धन लघुवित्त वित्तीय संस्था २७ करोड ९२ लाख नोक्सानीमा
कात्तिक २६, काठमाडौं । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले रू. २७ करोड ९२ लाख ८९ हजार नोक्सानी ब्यहोरेको छ ।
कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. २१ करोड ६३ लाख ५५ हजार नाफा कमाएको थियो ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा बढेकाले कम्पनी नोक्सानीमा गएको हो । गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ३० प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा बढेर १२ दशमलव ८९ प्रतिशत पुगेको हो ।
कम्पनीले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ३ करोड २५ लाख छुट्याएको थियो भने चालू आवको सोही अवधिमा रू. ५३ करोड ६३ लाख छुट्याएको छ । यसले गर्दा कम्पनीको नाफामा असर पुगेको देखिन्छ ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ५० करोड रहको छ । कम्पनीले यसवर्षका लागि जगेडा कोषमा रू. २ अर्ब २७ करोड ४२ लाख सञ्चित गरेको छ । कम्पनी नोक्सानीमा गएसँगै प्रतिशेयर आम्दानी पनि रू. १८ दशमलव ६२ ऋणात्मक रहेको छ ।
त्यसैगरी तरलता अनुपात ८ दशमलव ७३ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २५१ दशमलव ६२ रहेको छ । कम्पनीले ७७ ओटै जिल्लामा १८१ ओटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।